Ngathi - Huaian Shengda Machinery Co., Ltd.
Le nkampani ibekwe kwiSithili saseHuai'an, kwisiXeko saseHuai'an, inendawo yokwakha engaphezu kwe-60,000 yeemitha zesikwere kunye neefektri ezinkulu ze-6 zangoku. Le nkampani iye yazisa ezininzi kumgangatho wokuqala nkqo enkulu-ethe nkqo, tyaba kunye gantry machining amaziko evela kubavelisi abaziwayo ngamazwe ezifana Doosan, Japan Sun Industrial Machinery Co., Ltd. kunye nezixhobo ezizodwa. Iseke amaziko ovavanyo lokuqala kunye neelabhoratri ezinje ngeCMM. Amaqabane enkampani exesha elide kwimbiwa yesinyithi ebandakanya i-Sany Heavy Industry, i-XCMG, i-SDLG kunye namanye amashishini amakhulu oomatshini bokwakha.
Inethiwekhi yokuthengisa imveliso igubungela amaphondo angama-28 kunye nemimandla e-China. Inkampani ifumene i-ISO9001: 2016, iziqinisekiso ze-EU CE.
Inkampani ineenjineli eziphezulu, abagqatswa abagqirha abaneetalente zobuchwephesha obuphezulu, baseka iqela lophando oluzimeleyo oluzimeleyo kunye neqela lophuhliso. Le nkampani iye amalungelo awodwa omenzi wechiza ngaphezu kwama-30. Liye laba yinkampani ehamba phambili yamalungu angundoqo kunye ne-hydraulic breaker enobuninzi obuninzi, umgangatho ophezulu kunye nomxholo ophezulu-mveliso kwishishini.
Impahla eluhlaza-Ukumba umgodi- Ukucoca ubushushu- Ukugaya- Hlanganisa- Ukuvavanya- Ukupeyinta- Ukupakisha
Sikhetha izinto ezisemgangathweni ezikrwada, kwaye sisebenzise i-CMM enkulu ukwenza uhlolo olujikelezayo lwezinto eziphambili ezinje ngeesilinda kunye neepiston ukuqinisekisa ifom kunye nokunyamezelana kwendawo kunye nomgangatho webandla.
Inkampani ifumene i-ISO9001: 2016, izatifikethi ze-EU CE Amaqabane enkampani yexesha elide kwisinyithi se-hydraulic abandakanya iSany Heavy Industry, i-XCMG, i-SDLG kunye nezinye iingxilimbela zeshishini lokwakha.